Ny fiarovana Android dia olana iray izay matotra tokoa i Google | Androidsis
Manuel Ramirez | | fiarovana, Tutorials
Google nanambara omaly a fanatsarana ny filaminana amin'ny Android. Izy io dia hiandraikitra ny fanaraha-maso tsy tapaka ireo rindranasa miasa mba hanamarinana raha azo antoka izy ireo. Famakiana lehibe ho an'ny fitaovana Android mikasika ny filaminana.
Tokony ho fantatrao fa ny Android dia nahazo fanatsarana fiarovana hafa haingana kokoa noho ny taty aoriana. zahao ireo rindranasa alohan'ny hametrahana azy ireoNa dia hampiasa ny haitao fanandramana fampiharana Google ampiasainy ho an'ny fivarotana app aza ity endri-javatra vaovao ity.
Raha na inona na inona antony dia mahita olana amin'ny rindranasa ny rafitra fiasa. hampandre ny mpampiasa amin'ny hafatra mitovy aminy ity ao amin'io fanamarinana io ihany rehefa hametraka rindranasa izay ahiahiana ho mpanao ratsy isika.
Miaraka amin'ity fampiasa vaovao ity izay tadiavin'i Google manana fiarovana hafa satria mazàna atao amin'ny rafitra hafa na fanaraha-maso an-tsary ny trano izany amin'ny alàlan'ny fametrahana fakan-tsary hiarovana azy io.
Google dia nanaparitaka serivisy fiarovana amin'ny Android, hatramin'ny fampiharana voamarina alohan'ny hametrahana azy, fampitandremana amin'ny fampiharana mampidi-doza ary ankehitriny, miaraka amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka eo amin'ny fitaovana. Ireto "sosona" fiarovana ireto dia misy ao amin'ny Google Play hatramin'ny Android 2.3, noho izany azontsika lazaina fa manana izany ny ankamaroan'ny fitaovana Android.
anefa ny isan-jato dia ambany be raha oharina amin'ireo fampiharana mety manana fikasana ratsy izy io, miaraka amin'ny mpampiasa 0.18% izay nahazo hafatra fampandrenesana momba ny fampiharana iray izay mety hanimba, ny Google dia te-hanana fiarovana azo antoka araka izay azo atao.
Ny tsy fantatsika dia hisy fiantraikany amin'ny rafitra izany satria arahi-maso hatrany, indrindra amin'ny resaka fiainana bateria, satria heverina fa ho ampiana dingana iray izay ho eo hatrany aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Google manatsara ny fiarovana Android amin'ny alàlan'ny fitiliana tsy tapaka ireo fampiharana mihazakazaka